🥇 5 Eyona Antivirus ilungileyo ye-Android 【SIMAHLA ngo-2021】 | Izikhokelo ze-Android
Beka amagama agqithisiweyo kwiiapps
Iifowuni ze-emoji kwi-Android
Bona zonke iifundo
Imidlalo yebhola ekhatywayo ye-Android
Imidlalo ngaphandle kwe-Wi-Fi ye-Android
Imidlalo yeZombie ye-Android
Imidlalo yokubaleka ye-Android
Bona yonke imidlalo
Iialamu zemvula ze-Android
Ezinye iindlela zePicsArt mahala
Ezinye iindlela zokumisela mahala
Antivirus yasimahla ye-Android
Bona zonke iiapps
I-5 yeAntivirus ephezulu yeAroid
UManuel Ramirez | 14/05/2020 10:35 | IiApple zeApple
Kwi-Android sineeAntivirus ezinokuba zezona zibalaseleyo, kodwa kuqala kufuneka uyazi ukuba sijongane nenkqubo yokusebenza kwezixhobo ezikhuselekileyo ezikhuselekileyo.
Oko kwathethi, ukuba siyayazi indlela yokuphatha kakuhle kwaye Asiweli kule migibe yobuqhetseba, inkqubo yethu inokugcinwa ikhuselekile kakhulu; ngakumbi ukuba sihlala sinenkqubo ehlaziywa ngohlaziyo olukhutshwe ngabavelisi.
1 Eyona antivirus ilungileyo: uhlaziyo lwenkqubo
2 Avast Mobile Security
3 I-Kaspersky Mobile Antivirus
4 Ukhuseleko lokujonga kunye neAntivirus
6 Khusela iGoogle Play
Eyona antivirus ilungileyo: uhlaziyo lwenkqubo
Kukho intetho eninzi yokuba iifowuni eziphezulu azifanelekanga, kodwa kunjalo. Sijonge iselfowuni ehlaziywa rhoqo ngenyanga, sinazo zonke izizathu zokuba inkqubo yethu ihlaziywe ngokhuseleko.
UGoogle ukhupha uhlaziyo lokhuselo lwenyanga kwi-Android ukuba nenkqubo ihlale ilungile kwaye ikhuselekile. Kuhlala kuhlala kukho imingxunya kwisoftware, ke ngohlaziyo olutsha kuhlala kuhlala kukho imingxunya yokhuseleko abathi abanye abantu bazame ukungena kuyo.
Ezo patches zokhuseleko okanye uhlaziyo lwenyanga lwe-Android lungisa ezo bugs kunye nokuphucula ukhuseleko lwenkqubo. Yabela umenzi, onje ngeSamsung, loo nto xabisa uhlaziyo lwenyanga, Yeyona ngcebiso ibalulekileyo. Ngapha koko, iifowuni ezinjengeNqaku le-10, i-S10, okanye i-S9 zihlaziywa qho ngenyanga, ke ukuchitha ezinye iindlela kukhuselekile; Njalo khumbula ukuba abaninzi basebenzisa iifowuni zabo zomsebenzi emsebenzini.
Ewe, ukuya kwi-app yee-mobiles zethu, kwaye kwimeko yam ndingenayo enye efakiweyo, kufuneka sikukhumbuze ukuba kwinkqubo efana ne-Android usetyenziso lwale ndlela aludingeki kangako njengoko kusenzeka kwinkqubo efana neWindows; kwaye siyazi kakuhle yonke into edla ngokuba nenani elikhulu lemingxunya yokhuseleko.
Xa sele nditshilo, U-Avast wenze umsebenzi omkhulu kwii-PC ukubonisa ukuba indawo yokhuseleko inokunikezelwa simahla ukugcina inkqubo icocekile; nangona bahlala besenza njalo benefuthe elibonakalayo kwimithombo yobutyebi eceliwe kwinkqubo.
Inguqulelo yeselfowuni ilungile kwaye ibonakaliswa ngokunikezela ngeendlela ezininzi kwinguqulelo yayo yasimahla. Asizukuthetha ngeeapps ezihlawulelweyo, kuba ibandakanya intlawulo yonyaka okanye yenyanga. Ke apha u-Avast ufumana umvuzo omkhulu ngokulandela oko kuchaziweyo kuhlobo lwayo lweWindows.
Enye yezinto zayo ezilungileyo kukuba ukuba siya kuhlobo oluhlawulelweyo, iindleko ziphantsi kunezinye izisombululo esinazo kwi-Android. Ukusuka kwiimpawu zayo sishiywe nayo umcebisi wabucala, inkqubo yokunyanzelisa kunye noluhlu lwabantu abamnyama esinokuthi senze ngokwezifiso.
Inokhetho lokulwa nobusela, kodwa ukuba sihamba nefowuni ye-Samsung, ukuba sibeka iimpawu zayo ecaleni kophawu lwaseMzantsi Korea, akukho mbala. Inyaniso Izinketho zokulwa nobusela zeSamsung ziphakathi kwezona zilungileyo, ke inokuba ngumdla kuthi ukuba sinesiphelo esisezantsi esilela kukhetho lokhuseleko.
Kwakhona unokhetho olukhuselekileyo lomthi, okanye inethiwekhi yeVPN ekufuneka uhlawule kuyo ukufikelela kuzo zonke iindlela onokukhetha kuzo. Ngamafutshane, i-app ye-antivirus ukuba ukuba sijonga uninzi lweempawu zayo ayinanto yakwenza noko ikunikeza kwi-PC.
I-Avast Antivirus 2021-Ukhuseleko lwe-Android | Simahla
Umthuthukisi: Isoftware ka-Avast
I-Kaspersky Mobile Antivirus
Okunye ye-antivirus eyaziwayo yePC, kwaye kule meko iWindows iza nentlawulo. Apha sinenguqulo yayo yasimahla kwaye sisizathu sokuba siphawule ngobuhle bayo kunye nezibonelelo.
Phakathi kweempawu ezintle esinazo ukhuselo olukhulu lwe-malware, ukuvimba iifowuni kwaye akukho ntengiso kwinguqulelo yayo yasimahla; Olu khetho lokugqibela kufuneka luthathelwe ingqalelo ukuze ube namava ngaphandle kwezo ntengiso.
Ewe ungalindelanga ukuba ngoKaspersky, ngakumbi xa sithetha ngesuti ehlawulelweyo kwiWindows, uya kuba neenketho ezahlukeneyo zasimahla. Ngapha koko kukhululekile asinalo ukhetho oluzenzekelayo lokuskena usetyenziso; Into eyenziwa nguGoogle Play ngasendleleni, ke ukuba awunazicelo zifakwe kwi-APK sinokugqitha kuyo.
Kuya kufuneka sithethe ngexabiso layo xa lisiza yenza impembelelo encinci kwimithombo yenkqubo. Kulabo bayisebenzisa simahla, baya kuba nakho ukubanakho okucoca iifowuni, inkxaso ye-Android Wear kunye nolunye uhlobo olunomdla lwemisebenzi yokulwa nobusela.
Ukuba ukhetha ukuhlawula, ngokubuyisela uskena ngokuzenzekelayo ii -apps ezintsha, ukuvimba usetyenziso kunye neewebhusayithi ezaziwa ngobuqhetseba. Singatsho ukuba le app ye-antivirus yi ilungele ukuthintela i-malware ezinokubakho kwiselfowuni yethu, kuba ukukhuselwa ngale ndlela yenye yezona zilungileyo.
Iindlela ezi-3 zokususa i-malware kwi-Android
Kuyinyani ukuba isisombululo sentlawulo sikaKaspersky ayinakuthelekiswa neBitdefender, kodwa ewe kwinguqulelo yasimahla sinokuzifumana sikhululekile kuyo ukuze sithathe isigqibo kamva kwintlawulo yaso. Njengesiqhelo, kungcono ukuzama ezininzi kwaye uthathe isigqibo ngokwakho ukuba yeyiphi enokuthi ibe ngcono kuthi.
Kaspersky Antivirus Android Simahla-Ukhuseleko
Umthuthukisi: I-Kaspersky Lab Switzerland
Ukhuseleko lokujonga kunye neAntivirus
Olunye ukhetho olunomdla njenge-antivirus app kwiselfowuni yethu kwaye phakathi kweenkqubo zayo ezinxulumene nokhuseleko ziyaziwa. Singathetha ngeempawu ezininzi ekufuneka sizithathele ingqalelo. Omnye ngowakhe ujongano lwangoku kwaye olunomdla, kwaye elinye linamandla amakhulu okukhusela iiakhawunti zethu kunye nesazisi.
Singaphambili enye yeenkqubo zokuqala ze-antivirus esele sinazo kwi-Android kwaye ibisoloko ibonakaliswa lujongano lwangoku, kwaye ehambisa intengiso kuhlobo lwayo lwasimahla. Le nkcukacha yokugqibela imvumele ukuba ajongane nezinye iapps ezaziwa kakhulu kwezinye iisistim kwaye ukuba uninzi luqhubeke lube lolona khetho lusebenzayo lokuthatha amanyathelo okhuselo nokhuseleko.
Kunjalo, andinazintengiso zingenayo, asizukukhetha ezininzi ezandleni zethu simahla. Ngokusisiseko ihlala iskena kwi-malware kunye nokufumana iifowuni ezilahlekileyo; Kodwa yiza, olu khetho lokugqibela sicebisa umphathi weDivayisi kaGoogle okanye isisombululo esifanayo seSamsung kwaye isebenza njengekhubalo.
Ndifumana iintengiso kwiselfowuni yam, ndenza ntoni?
Sineenxalenye zepremiyamu yokuKhangela simahla kwezinye iiaphulelo ezifana nokuskena kwinethiwekhi yeWiFi kunye nokubhloka iiwebhusayithi ezinobungozi. Intoni Ewe enika ixabiso kwinkonzo yeprimiyamu yiVPN esinokuthi sinxibelelane ngayo ukugcina idatha yethu ikhuselekile kakhulu.
I-Antivirus kunye noKhuseleko SIMAHLA
Umthuthukisi: Ukhuseleko loKhuseleko lweSelfowuni
Sine McAfee owaziwayo Kwaye oko kwi-Android kuza netoni yeempawu zasimahla. Ewe kunjalo, lungela intengiso yayo engafunekiyo kunye neengcebiso zokufaka ezinye ii -apps. Phakathi kwamaxabiso aso aphezulu sinokhetho "undwendwe", ukuze nabani na akwazi ukusebenzisa iselfowuni kwaye siqinisekile ngayo, kunye nokukhuselwa kwe-malware.
Kwakhona sinemisebenzi echasene nobusela, ulawulo lokusetyenziswa kwedatha kwiiapps kunye neskena sokhuseleko se-WiFi. Ukuba siya kwimisebenzi yokuhlawula sinombonisi we-URL onomdla wokujonga kuqala ngaphambi kokuya kwiwebhusayithi, i-app blocker, akukho ntengiso kunye nenkxaso ye-24/7.
Sifikile ngeeyure ezingama-30 ngonyaka yokupasa kwakho umgangatho, kodwa ngeli xabiso sinezinye iiapps ezinje ngezangaphambili ezinikezela ngokufanayo ngokuncinci. Ngapha koko, uMcAfee udlala ngamava akhe kunye negama ukunika uluvo lokhuseleko nalapho abaninzi baya kuwela khona.
Ukuba sele sikhona masiye kuhlobo lwayo lokudibanisa siya kuba nenkonzo enkulu yeVPN ephantse ibe yenye yezona mpawu zayo zibalaseleyo, uhlala ujonga kwi-vertex ehlawulelweyo kwaye ayisiyiyo eyasimahla.
Ukhuseleko lweSelfowuni: Khusela i-Wi-Fi ngeVPN kunye noChasene nobusela
Umthuthukisi: UMcAfee LLC
Khusela iGoogle Play
Siphetha ngento esinokuyithetha yeyiphi eyona ndlela ifanelekileyo, kuba ivela kuGoogle kunye nezo mpawu ziyimfuneko. Le antivirus okanye umkhuseli wokhuselo udityaniswe kuyo yonke iselfowuni efakwe nguGoogle Play; okanye yintoni ivenkile yomxholo we-Android.
Ewe kunjalo, bakho khetha inkqubo engcono yokukhusela i-app kunoGoogle Play, kodwa ukuba ungumsebenzisi oqhelekileyo onefowuni ehlaziywe kakuhle, uGoogle Play ungaphezulu kokugqibeleleyo.
Eyona nto ilungileyo yile inefuthe elincinci kwinkquboAyinazintengiso kwaye ibandakanya Fumana isiXhobo sam kunye noKhangelo oluKhuselekileyo lweChannel. Kodwa ngaphandle kwamathandabuzo, owona msebenzi ubalaseleyo kukususa kude ii -apps ezinobungozi.
Yindlela esiphela ngayo Uluhlu lweyona antivirus ilungileyo ye-Android Kwaye elona cebiso lobulumko: ukulumka asiyidingi i-antivirus kwi-Android.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Izikhokelo ze-Android » IiApple zeApple » I-5 yeAntivirus ephezulu yeAroid
yenzayo Iinyanga ze3
Ungarhuma njani kwi-HBO
Eyona midlalo yeephuli kwi-Android